Haweeney 90 jir ah oo noqotay qofkii u horreeyay ee qaata Talaalka Coronavirus – AfmoNews
Haweeney 90 jir ah oo lagu magacaabo Margaret Keenan ayaa noqotay qofkii u horreeyay ee UK laga talaalo cudurka Coronavirus.
Talaalka ayaa lagu bilaabay dadka ay da’dooda ka weyn tahay 80-ka sano, waxaana ay bilow u tahay qorshaha lagu talaalayo dad badan, si looga hortago cudurka Coronavirus.
Illaa 70 Isbitaal ayaa la qorsheynayaa in laga bilaabo isbuucan talaalka cudurka Coronavirus.
Margaret Keenan ayaa todobaadkan u dabaal dageysa dhalasheeda 91aad, iyadoo ay sheegtay inay tahay haddiyadii ugu wanaagsaneyd ee dhalashadeeda
“Waxaan dareemayaa inaan aad u nasiib badanahay inaan noqdo qofkii ugu horeeyay ee qaata talaalka looga hortagaayo cudurka Covid-19, waa hadiyaddii ugu wanaagsanayd ee dhalashayda, ugu dambayntii waxaan wakhti la qaadan karaa qoyskayga iyo saaxiibaday, sanadkan waxaan muddo badan ahaa qof kaligiis ah”ayey tiri Ms Margaret Keenan.
Cudurka safmarka ah ee Coronavirus ayaa caalamka oo dhan saameeyay sanadkan, iyadoo kumanaan ruux ay u dhinteen, halka boqolaal kun oo kale uu soo ritay, waxaa aad loogu dadaalayay in la helo tallaalka cudurka, isku daygan ayaa noqonaya kii u horreeyay ee dalka Ingiriiska ku guuleysto.